Ivili le-Fortune Glossary - Imigqaliselo eqhelekileyo kunye neengcaciso
Ivili le-Fortune linye yezo zibonisa ukuba sele lide kangangokuba wonke umntu uyazi ukuba isebenza njani nokuba yintoni na. Umboniso ube ngumthombo wobuncinane ibinzana elithandwa kakhulu, kwaye unemigangatho emininzi esetyenziswa rhoqo ngexesha lokudlala umdlalo.
Nazi ezinye zeendlela eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo kumboniso, kunye neentsingiselo zabo kunye / okanye izicelo zabo ngaphakathi komdlalo.
Awukwazi ukuba ne Wheel Fortune ngaphandle kwe Wheel ngokwayo!
Ivili likho entliziyweni yomdlalo, kwaye liqukethe iqoqo leedredges. Umtya ngamnye uqulethe ixabiso le dollar okanye iqela elilodwa lomdlalo. Ivili lihlanjwe ngabaphambili ukuba lichonge ixabiso lala maqononongo abaqiqa kakuhle kwi-puzzle. Kukho nemiyalelo efunyenweyo, efana nokuLahla ukujika, okanye iibhaso eziza kuthathwa.
Njengoko kukhankanywe ngasentla, i-wedge iinqununu zesondo. Igama elithi "wedge" ngokuqhelekileyo lisetyenziswe kwimiboniso ngokubambisana nomvuzo okhethekileyo okanye ithuba, njenge- Free Play wedge . Kwakhona kusetyenziswe ukukhushulwa, njengowongeza ukonkxwa kweNtetho yokuThetha, i-$ 5K.
Iipuzzle ze-Toss-Up zidlalwa phambi komjikelezo oqhelekileyo, kwaye zifanelekile imali emiselwe ngaphambili. Iileta kwi-puzzle zibonakaliswe ngokukhawuleza kwaye umntu wokuqala ukuqiqa impendulo uzuze umjikelo kwaye uqala ukujikeleza rhoqo.
Ujikelezo lwe-Speed-Up ngumjikelezo wokugqibela wemidlalo.
Iqala njengesiqhelo, kodwa phakathi kweendlovu izandi kunye nePat Sajak zimemezela ukuba ziphuma ngexesha. Unika ivili ngesigxina sokugqibela, kwaye nayiphi na into ebangelwayo yokubeka ixabiso leendonari ngexesha le puzzle. Iimawombe azifanelekanga ngaphandle koko ziqikelelwe. Abaqhubi banokutshintshela ukuqaphela iileta kunye nokuzama ukucombulula de ukugqitywa kweenxa zonke.
(Ukuncokola: Ukuba iPat ijikeleza umhlaba kwi-Bankrupt okanye iLahle i-Turn, oku kuhleliwe kwaye iphinda iphindwe kwakhona.)
Isiqendu ngasinye siquka iPuzz Puzzle, enika umvuzo okhethekileyo kumqhubi waloo jikelo. Amanqaku angaba nayiphi na into evela kwizinto zokunethezeka ukuya kwiihambo. Isibheno esiyingqayizivele sePlaziza yeNkcazo kukuba abaphangi bazama ukuyicombulula ngokukhawuleza kunokwenzeka, kunokuba baqhube phambili befuna ukufumana imali engaphezulu ukuze bafumane umvuzo.
I-Round Round ibhola elidlulileyo lomdlalo, idlala ngumdlali ofumana umvuzo omkhulu kunye nemiklomelo ngeenxa zonke. Ukuqala kunye nalo, umqhubi uphendulela isondo elincinci eliqulethe iiphepulethi ezichonga amaxabiso atholakalayo. Emva kokufika kunye nokukhetha imvulophu yakhe, umqhubi uyaboniswa nge-puzzle yokugqibela. Iileta R, S, T, L, N, ne-E zinikezelwa zonke. Iincononti ezintathu kunye nezinye iibhenyile ezikhethiweyo zikhethiweyo, kwaye umncintiswano unemizuzwana eyishumi ukulungisa i-puzzle. Emva koko, imvulophu ekhethiweyo ivuliwe ukuba ibone ixabiso eliyiphumelele (okanye liphumelele ukuphumelela).
Ngaphambi nangemva kweCandelo
Iphazili ngalinye linomlinganiselo, onika abaphikisanayo isicombululo sekhazili. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo, ezifana nokutya nokusela okanye uyenze ntoni?
Enye yeendidi ezinqabileyo kakhulu Ngaphambi nangemva, ezidibanisa amabinzana amabini ahlukeneyo kunye negama eliqhelekileyo. Imizekelo yePhambi & Emva kwepuzzle ifaka:
Yenza i-Funky Chicken Noodle Soup
I-Good Good and Badly Duckling
UNancy Drew Barrymore
I-Wheelmobile ayibonakaliswa kwintetho kaninzi, kodwa ibe yinxalenye yesazisi sokubonisa. Nabani na ofuna ukukhuphisana nombukiso kufuneka ahlaziye kule nkcazo!
'Amanqaku aphezulu aphezulu eMelika' Abaphumeleleyo - Bajonge Ngoku!
Ukudibanisa 'I-Rich Kids of Cast Beverly' Cast
Unokufumana njani iiTikiti kwi-"Talk" kwi-LA
Umlobi 'wosapho weBufana' uchaza 'Joke's Burgers' Joke
Umkhosi weHindu Ramnavami: umhla wokuzalwa weNkosi Rama
Iimpawu ze-Giant Silkworm Moths kunye neRoyal Moths
Yintoni Ukubala i-Omer?
Indlela yokwenza i-White Smoke Chemistry Ukubonakalisa
Iikholeji ezili-10 ezisemgangathweni
Fumana ukuba yiyiphi impazamo isandla kunye neSandla kufuneka sibe Ngokuphumla